Inta badan Go'aanka Iibsashada ee B2B wuxuu dhacaa kahor intaan lalaxiriirin shirkaddaada | Martech Zone
Waqtiga ganacsi kale uu la xiriirayo ganacsigaaga si uu u iibsado badeecadaada ama adeeggaaga, waa iyagii saddex-meelood laba meelood ilaa 90 boqolkiiba inta loo marayo safarkooda iibsashada. In ka badan kala bar dhammaan dadka wax iibsada ee B2B waxay bilaabaan hawsha xulashada iibiyahooda xiga iyagoo samaynaya xoogaa cilmi baaris aan rasmi ahayn oo ku saabsan caqabadaha ganacsiga ee la xiriira dhibaatada ay baarayaan.
Tani waa xaqiiqda adduunka aan ku nool nahay! Iibsadayaasha B2B ma laha dulqaad ama waqti ay ku sugaan wakiilkaaga iibka dibedda ah inuu u soo bandhigo alaabtaada ama adeeggaaga iyaga. Iyaguba way ka warqabaan dhibaatada waxayna durbaba baarayaan xalka. Kooxdaadu waa inay soo saartaa waxyaabo taageeraya oo dhisaya hay'ad warbaahinta bulshada ah iyo natiijooyinka raadinta si aad ugu qaban karto goor hore heerarka cilmi baarista. Ou
Iibinta B2B way adkaan kartaa, hadaadna la mid tahay shirkado badan oo halkaas jooga, waxaad miiqeysaa giraangirahaaga oo isku dayaya inaad ku iibsato iibka xeeladaha dibedda ee caadiga ah sida wicitaanka qabow, meheradaha iyo boostada tooska ah. Sawir gacmeedkan, Iibinta B2B way isbadashay, ayaa ku tusi doonta sababta ay suuqleyda caqliga badani si deg deg ah ugu beddelanayaan iibkooda banaanka iyo istiraatiijiyadda suuqgeynta qaab soo galid ah. Waxaad ubaahantahay inaad abuurto hogaamin badan iyo ugu dambeyn dakhli intaa kabadan, xogtani waxay kuu tilmaami doontaa aaladaha kugu soo celin kara wadada saxda ah. Ka Soo Qaad Media Media.
Qaar ka mid ah dadka waaweyni waxay jeclaan lahaayeen inay soo galaan gudaha si ay ugu beddelaan suuqgeynta dibadda. Ma aaminsani inay taasi tahay isbarbardhig sax ah. Xaqiiqdii, waxaan rumeysanahay isku-darka dadaalka dibedda iyo ka-bixidda inuu kuu badinayo fursadahaaga inaad si hufan u xirto. Mawduucu wuxuu leeyahay meerto nololeed aad u wanaagsan sidoo kale - sawir-gacmeed ama warqad-caddeyn ayaa wadi kara hoggaaminta sannadaha, taas oo u oggolaaneysa kooxdaada iibka dibedda inay diiradda saaraan dhismaha xiriirka iyo xiritaanka iibka halkii si fudud loogu wargalin lahaa rajada.
Tags: safarka iibsadayaasha b2bsuuqgeynta b2bgo'aanka iibsiga b2bb2b cilmi baarisiibinta b2bsafarka iibsadayaashago'aanka iibsiga
Adiga Keliya Maaha Halganka Falanqaynta
Chirpify: Ku dar beddelaad kormeerkaaga warbaahinta bulshada